I-Cannery Cabin, i-Kachemak Bay Oceanfront - I-Airbnb
I-Cannery Cabin, i-Kachemak Bay Oceanfront
Seldovia, Alaska, i-United States
Isiqhingi ibungazwe ngu-Kristi
U-Kristi Ungumbungazi ovelele
I-adventure yakho iqala ngokugibela itekisi yamanzi ukuya ogwini lwethu. Kusuka kukhabethe lakho eliyingqayizivele, ukude nebhishi elinesihlabathi lapho kugqekezwa khona imikhomo, kudlala ama-otter kanye nezinkozi zindiza phezulu. Amakhabethe ethu akhiwe ezihlahleni futhi anikeza ukubukwa okuhle. Chitha izinsuku zakho uzihambela kulo mhlaba owumlingo. Ekupheleni kwezinsuku, phumula ku-sauna yethu noma kubhavu oshisayo bese uzinza eduze komlilo osogwini kuyilapho ujabulela ukushona kwelanga okuhle phezu kwe-Kachemak Bay. Lala ngomsindo wokuntweza bese uvuka lapho kuphuma ilanga phezu kweKasitsna Bay.
Lapho ulwandle olulodwa alwanele! Le khabethe elihle likanokusho i-12X16 lizungezwe ezihlahleni futhi lizungezwe amabhishi. Ikhabethe lilala 3 nombhede ongu-1 ogcwele kanye nombhede wosuku olungu-1. Ubuncane bokuhlala ubusuku obungu-2. Ikhabethe ngalinye lihlome kahle okuhlanganisa amalineni ombhede, amathawula, amathawula ephepha, nephepha lasendlini yangasese, ishampoo, okokulungisa, insipho. Ikhishi lihlanganisa usinki, ifriji, imicrowave, itoaster, isitofu sokupheka, amabhodwe, amapani, izitsha nezitsha, umenzi wekhofi, izinongo eziyisisekelo nokunye. Kukhona indlu yangasese eshaywayo eneshawa yangasese eshisayo enamathiselwe eceleni kwekhabethe enokubukwa okuhle kweKachemak Bay. Ikhabethe ngalinye linokushisa kukagesi, indawo yokushisa igesi, kanye nezindawo zokuhlala eziyimfihlo ezingu-2--enye olwandle ngalunye, ama-clam rakes, namabhakede. Ukufinyelela kubhavu oshisayo obaswa ngokhuni nesauna. Ukuqashwa kwekhabhinethi kuhlanganisa ukusetshenziswa kwama-kayak nezikebhe ezigwedlwayo kanye nezinkuni zosizo ezinikezwayo.
Ungavakashela eMacDonald Spit eKasitsna Bay lapho indawo yethu yokulala enhle itholakala ngomoya noma ngamanzi. Jabulela ukugibela indiza ebabazekayo kusukela e-Anchorage noma e-Homer noma ukugibela itekisi lamanzi ukusuka e-Homer Harbour udlula e-Kachemak Bay State Park enhle kakhulu. Uma usufikile, usuka ekhabetheni lakho noma e-Beach House usuka nje ogwini olunesihlabathi lapho kugqekeza khona imikhomo, kudlala ama-otter kanye nezinkozi zindiza. Izindawo zethu zokuhlala eziyingqayizivele ziphakathi kwezihlahla ze-spruce kanye ne-alder futhi zinikeza ukubukwa okuhle kwamatheku anenkungu, iziqhingi eziluhlaza, nezintaba ezimbozwe yiqhwa, ngaphandle kokuma emthunzini wazo. Vakashela igalari yethu yobuciko futhi uchithe izinsuku zakho uziphumulele ku-hammock noma ukuzijabulisa kule ndawo yokudlala yemvelo yomlingo. Ekupheleni kosuku, phumula ku-sauna yethu noma kubhavu oshisayo bese uhlala eduze komlilo opholile ngenkathi ilanga lishona ngokukhazimula okumangalisayo. Lala ngenxa yemisindo yokuntweza olwandle bese uvuka ekuphumeni kwelanga okugqugquzelayo ngemisindo yocingo lwe-Eagles ngenkathi ujabulela ikhofi lakho lasekuseni. Woza uzozijabulisa futhi uphumule nathi futhi wenze izinkumbulo nabangani kanye nomndeni wakho ozozazisa impilo yakho yonke.
Abasebenzi bethu abanobungane bayatholakala esizeni ukuze basize izivakashi futhi baphendule imibuzo.
UKristi Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Seldovia namaphethelo